राज्यकोषको सुविधासम्बन्धी बहस टुङ्गिएन » खबरहरुको एउटै केन्द्र
राज्यकोषको सुविधासम्बन्धी बहस टुङ्गिएन
आईतवार, फाल्गुन ८, २०७३ ०२:५७ मा प्रकाशित !
फागुन ८, काठमाडौँ ।
राजनीतिक दलहरूको भड्किलो चुनावी कार्यक्रम र अनियमित चन्दा रोक्न तत्कालीन सरकारले आ.व. २०६०/६१ को बजेट वक्तव्यमार्फत दललाई राज्यकोषबाट रकम दिने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । निश्चित मतको सीमा कटाउने राजनीतिक दललाई प्रतिमत २० रुपियाँ दिने बजेट वक्तव्यको प्रस्ताव थियो । तर, मूलधारका राजनीतिक दलले तत्कालीन सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै उक्त निर्णयको विरोध गरे । लोकतान्त्रिक आन्दोलन तयारीको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन सरकारले अगाडि सारेको प्रस्तावको चर्को विरोध भयो । विरोधकर्ताको भनाइ थियो– सार्वभौम जनताको मतको मूल्य तोक्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो? राजनीतिक परिस्थिति दललाई करिब निषेध गरेको अवस्था थियो । मतका आधारमा पैसा दिन्छु भनेर दललाई प्रतिगमन समर्थनको आधार बनाइएको भन्दै दलहरूको विरोध थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेट वक्तव्यमा सामेल गर्नुभएको दलहरूलाई राज्यकोषको रकम दिने योजना कार्यान्वयन भएन । ठीक १३ वर्षपछि यतिबेला फेरि राजनीतिक दललाई राज्यकोषको रकम दिने वा नदिने भन्ने बहस जारी छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा मूलतः दुई विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । दुई विषय हुन्– राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन न्यूनतम मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) र दललाई राज्यकोषको रकम दिने वा नदिनेसम्बन्धी विषय । राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा मुख्य दुई विषयमा मात्र सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताए । घर्तीले भने, “सबै विधेयक टुङ्गो लागिसकेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्ड र दललाई राज्यकोषको रकम दिने–नदिने भन्नेमा छ । ”
निर्वाचन आयोगले भने निश्चित मतको सीमा कटाएका राजनीतिक दललाई राज्यस्रोतबाट रकम दिने प्रस्ताव प्रारम्भिक विधेयकमा गरेको थियो । कुल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत मतको सीमा कटाउने दललाई पैसा दिने प्रस्ताव आयोगको थियो । निर्वाचन खर्चको पारदर्शिताका लागि दललाई रकम दिनु उपयुक्त हुने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको समेत धारणा छ ।
तर, संसद्मा प्रमुख दलले यसबारे ठोस धारणा बनाएका छैनन् । राज्यकोषको रकमलाई राजनीतिक दलले स्वीकार वा अस्वीकार दुवै निर्णय लिन सकेका छैनन् । साना दलले भने उक्त रकम दिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रामेश्वर फुयालले दललाई राज्यकोषको रकम दिने व्यवस्था गर्नुअघि उचित मतसीमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । फुयालले भने, “राज्यकोषको रकम दिने व्यवस्था लगत होइन तर थ्रेसहोल्ड पाँच प्रतिशतसम्म व्यवस्था गर्नुपर्छ । ” नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले राज्यकोषबाट रकम दिने व्यवस्थाले मतदातामा गलत सन्देश जाने बताए । सुवालले भने, “मतदाता शिक्षा व्यवस्थित नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकको यो व्यवस्था ठीक हुन्न । मतदाताले हामीलाई तिमीहरू पैसा पाउँछौँ, हामीलाई मत दिनुअघि देऊ भन्छन् । ” राज्यकोषबाट रकम दिने व्यवस्था विश्वका धेरै देशमा छ । सदर मतको कम्तीमा एक हजार मतदेखि दस प्रतिशत मतसम्मका सीमा ती देशमा छन् । तोकिएको थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलले राज्यकोषको सुविधा पाउँदैनन् ।
नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडीआई)ले गरेको अध्ययनअनुसार डेनमार्कमा एक हजार सदर मत कटाउनेले राज्यकोषबाट रकम पाउने व्यवस्था छ । इक्वेडरमा शून्य दशमलव शून्य चार प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ । जर्मनीमा सदर मतको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत मत कटाउने दलले राज्यकोषको सुविधा पाउँछन् । फिनल्यान्ड र नेदरल्यान्डमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक सिट ल्याउने दलले राज्यकोषको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । उरुग्वेमा सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत ल्याउने दलले राज्यकोषबाट रकम पाउने व्यवस्था छ ।
क्यानाडामा दुई र आइसल्यान्डमा साढे दुई प्रतिशत मत ल्याउने दलले राज्यकोषको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । स्पेन, लिथुनिया, पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, चेक रिपब्लिकमा राज्यकोषको सुविधा पाउन तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोस्टारिका, इटाली, निकारागुआमा राज्यकोषको रकम पाउन सदर मतको चार प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । जर्जिया, क्रोएसिया, ताञ्जानिया, ग्वाटेमाला, यमन, टोगो, जिम्बाब्वेमा सदर मतको पाँच प्रतिशत ल्याउने दलले मात्र राज्यकोषको सुविधा पाउँछन् । सदर मतको सात प्रतिशत मत ल्याउने दलले मात्र टर्कीमा राज्यकोषको सुविधा पाउँछन् । हैटीमा सदर मतको दस प्रतिशत मत ल्याउने दलले मात्र राज्यकोषको सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
PREVIOUS POST Previous post: आज बिहानै ४।४ रेक्टर स्केलको पराकम्पन
NEXT POST Next post: नेपाललाई विश्वमाझ चिनाउँदै जोली अमात्य
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, फाल्गुन ८, २०७३ ०२:५७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, फाल्गुन ८, २०७३ ०२:५७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, फाल्गुन ८, २०७३ ०२:५७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, फाल्गुन ८, २०७३ ०२:५७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, फाल्गुन ८, २०७३ ०२:५७